Ogaden News Agency (ONA) – Riwaayadii La’isla Jilayay Markay Soo Afjarantay – Noora Afgaab
Riwaayadii La’isla Jilayay Markay Soo Afjarantay – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ March 24, 2015
Waxaan qalinka iyo warqadda isdul saaray saddex maalmood ka hor saan xogta taala Jigjiga wax un idinkala socodsiiyo. Hasa ahaatee waxaa igu adkaatay meeshaan ka bilaabi lahaa iyo saan u kala soocan lahaa wararka igu soo dhacaya ama aan indhahayga ku arkayo. Xataa cinwaanka aan u dooran lahaa warbixintayda ayaan saacado dul fadhiyay, ugu dambayntiina waxaa iisoo baxday in xaaladda ka jirta Jigjiga ay tahay muusaqadii ugu dambaysay ee Riwaayad ay isla jilayeen kooxa badan oo heshiis ku ahaa la dagaalanka ONLF amaba dhahoo himiladii shacabka Somalida Ogadenya ee qarniga soo taxnayd, hasa ahaatee midba midka kale uu ka qarinayay maslaxadda ugu jirta arintaa. Su’aashaa ayaan weydiiyay dad aqoon iyo waxgaradba ah oo dhinacyadaa kala raacsanaa, anigoo ku talagalsan in la dhaafay hadda waqtigii wax lakala qarsan jiray, sababtoo ah wax walba way qasmeen.
Ugu horeyn waxaan la fadhiistay wadaad ama businessman ka mid ahaa ururkii Ibraahim dheere ee UWSLF oo meel kaligii ku qaxweynaya. Sheekooyinka Jigjiga ee caadiga ah ka dib ayaan weydiiyay, maxay tahay sababta uu Cabdi iley dib idiinku soo fireeyay? Wuxuu damcay inuu arin diineed ka dhigo iyo inay doonayeen fidinta dacwada, hasa ahaatee markaan arimahaa isla dhaafnay oon runta isula soo daadagnay ayuu dhab ahaan iigu waramay, wuxuuna yidhi; Horaa loo yidhi Labadii been ku heshiisa runtay ku kala tagaan. Anaga hadaf ayaan ka lahayn heshiiska aan la galnay Itobiya. Iyaguna hadaf kale ayay naga lahaayeen. Hadafkanagu wuxuu ahaa in aan dhaqaalaha Ogadenya gacanta ku dhigno, iyaguna hadafkoodu wuxuu ahaa inay noo adeegsadaan la dagaalanka ONLF. Arintaa dhankanaga si niyadsami ah ayaan u galnay, wixii karaankanaga ahna waan ku taageernay Itobiya. Xataa arimo badan oo diin ahaan aan wanaagsanayn ayaan fulinay ama indhaha ka roganay anagoo danta aan leenahay xeerinayna. Hasa ahaatee Itobiya oo Cabdi iley adeegsanaysa waxay naga dhigteen gumaca xabadda ku jirta oo qofka la doonayo lagu dilo, ka dibna aan lahayn nacfi dambe. Dhowr sano ka dib, Itobiya way wada riday xabadihii, waxaana usoo hadhay qashirkii, oon waxba dili karin wayna na daadisay.
Wuxuu ahaa nin aad u caqli badan oo si kooban oon sharaxaad dambe loogu noqonaynin iigu ifiyay xaaladda ay ku sugan yihiin kooxdii Ibraahim dheere ee Cabdi iley uu biladda iyo koobka siiyay.
Nin maamulka Cabdi iley waligiiba ka tirsanaa, oo ah shaqaalaha dhul jiifka ah ee tooshka Cabdi iley uusan qabanin, ayaan kula kulmay haasawaha jaadka. Waxaan sheekadii mirqaanka u duway in aan ka sheekaysano colaada ka dhex aloosan Cabdi iley iyo Sirdoonka Itobiya. Waxaa ka mid ahaa hadaladiisa, meesha awalba waxba laguma haynin. Dadka oo la laayo iyo lacagta oo lakala qaybsado. Waxaa is-jiidhay maslaxadii kooxaha faraha badan ee Cabdi iley uu quudiyo dhiiga shacabka. Ninkan caloosha weyn (cabdi iley) waa mujrim aad la yaabi marmarka qaarkood xeeladaha uu isticmaalo iyo siduu dadka qoorta isugu galiyo. Waxyaabaha qosolka leh ee la sheego waxaa ka mid ah, inuu baqshadaha lacaga badan oo doolar ah u galiyo saraakiisha, ka dibna intuu magacyadooda ku qoro uu siiyo mid walba baqshad aan magaciisa ahayn. Muddo yar ka dib ayuu labada uu doonayo inuu kala dilo u yeedhaa midkood oo uu ku yidhaahdaa lacag intaa gaadhaysa ayaan kuu soo galiyay, waxayse nagaga khaladantay baqshadaadii hebel. Muddo yar ka dib labadii sarkaal oo luqunta iskula jira umbaa la arki. Wuxuu kusoo gabagabeeyay sheekadiisii, waxaan aaminsanahay inuu Cabdi iley baqshadihii u kala wareejiyay jenenka Ogadenya xukuma ee Abraha Wolde iyo Getachew Asafa (madaxa sirdoonka Itobiya). Inuuse markan ku caana maali iyo inay la rogman waan sugaynaa, halkaa ayuu waagii noogu baryay.
Sheekooyinkaa sida dhabta ah kuugu ifinaya xaaladda Jigjiga ka jirta marka laga yimaado, qaska ka socda Jigjiga wuxuu hadheeyay Adisababa oo sidaan qoraaladii hore kusoo sheegnay la kala safan saraakiisha uu Abraha Wolde hogaaminayo oo ka dagaalamaya in dhuunta dhaqaale laga jaro, iyo koox uu hogaaminayaan Getachew Asafa iyo R/wasaaraha aan awood lahayn.
Maanta halkaa hanoo joogto.